१० ब्रान्ड निगरानी उपकरणहरू जुन तपाईं सित्तैमा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ Martech Zone
१० ब्रान्ड निगरानी उपकरणहरू जुन तपाईं सित्तैमा सुरू गर्न सक्नुहुन्छ
सोमबार, अप्रिल 5, 2021 सोमबार, अक्टोबर 18, 2021 अन्ना ब्रेडावा
मार्केटिंग ज्ञानको त्यस्तो विशाल क्षेत्र हो कि कहिलेकाँही यो भारी हुन सक्छ। यस्तो लाग्दछ कि तपाईंले एक पटकमा हास्यास्पद चीजहरू गर्नु आवश्यक छ: तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिको माध्यमबाट सोच्नुहोस्, सामग्रीको योजना बनाउनुहोस्, SEO र सोशल मिडिया मार्केटिंगमा नजर राख्नुहोस् र यस्तै अरू पनि धेरै।
भाग्यवस, त्यहाँ सधैं मद्दत गर्न मार्टेक छ। मार्केटिंग उपकरणहरू हाम्रो काँधबाट भार लिन र विपणनको कष्टदायी वा कम उत्साहजनक भागहरू स्वचालित गर्न सक्दछ। यस बाहेक, कहिलेकाँही तीनिहरूले हामीलाई अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छन् जुन हामी कुनै अन्य तरिकामा प्राप्त गर्न सक्दैनौं - जस्तै ब्राण्ड मोनिटरिंगले गर्दछ।
ब्रान्ड निगरानी के हो?
ब्राण्ड निगरानी तपाईंको ब्रान्डसँग अनलाइन कुराकानी गर्ने कुराकानीको प्रक्रिया हो: सोशल मिडिया, फोरमहरू, समीक्षा एग्रीगेटरहरू, वेबसाइटहरू, र यस्तै। केहि अनलाईन च्यानलहरू, उदाहरणका लागि धेरै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्न ब्रान्ड ट्याग गर्न अनुमति दिन्छ। तर ती ट्याग गरिएको उल्लेखहरू सजिलैसँग मिडिया मिडिया शोरमा हराउन सक्छ।
हाम्रो निपटानमा अनलाइन च्यानलहरूको संख्याको साथ, यो म्यानुअल तरिकाले सबै कुरा ट्र्याक गर्न मानवीय रूपमा असम्भव छ। ब्रान्ड निगरानी उपकरणहरूले तपाइँको कम्पनीको अनलाइन गतिविधि ट्र्याक गर्न, तपाइँको प्रतिष्ठामा नजर राख्नुहोस्, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई जासूसी गर्ने र अन्य मद्दत गर्दछ।
तपाईंलाई ब्रान्ड अनुगमन किन चाहिन्छ?
तर के तपाइँ वास्तवमै अरूले तपाइँको ब्रान्डको बारेमा अनलाइन के भनिरहेछ निगरानी गर्न आवश्यक छ? पक्कै पनि तपाइँ गर्नुहुन्छ!
तपाइँको ब्रान्डको अनुगमनले तपाइँलाई अनुमति दिन्छ:
तपाईंको लक्षित श्रोतालाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्: तपाईं कुन सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म र वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, कुन भाषा तिनीहरू बोल्छन्, कहाँ बस्दछन्, आदि।
तपाईंको ब्रान्डको शक्ति र कमजोरीहरू के हो बुझ्नुहोस्। ब्रान्ड निगरानी गर्दा तपाइँ ग्राहकहरूको गुनासो र अनुरोध फेला पार्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको उत्पादन कसरी सुधार गर्ने भनेर आंकडा पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको सुरक्षा गर्नुहोस् ब्रान्ड प्रतिष्ठा पीआर संकटको बिरूद्ध। चाँडै तपाइँको ब्रान्डको नकरात्मक उल्लेखहरू फेला पारेर तपाईं उनीहरूसँग डिल गर्न सक्नुहुनेछ उनीहरू एक मिडिया स crisis्कटमा परिवर्तन हुनु अघि।
मार्केटिंग अवसरहरू फेला पार्नुहोस्: नयाँ प्लेटफार्महरू, ब्याकलिink्क अवसरहरू, र बजारहरूमा समुदायहरू फेला पार्नुहोस्।
प्रभावकारीहरू पत्ता लगाउनुहोस् जो तपाईसँग सहयोग गर्न चाहन्छन्।
र त्यो मात्र सुरुवात हो। ब्रान्ड अनुगमन उपकरणहरूले यो सबै गर्न सक्दछन् र अधिक - तपाइँ केवल तपाइँको व्यवसाय को लागी सही छनौट गर्न आवश्यक छ।
ब्रान्ड निगरानी उपकरणहरू तिनीहरूको क्षमताहरूमा फरक हुन्छन्, केहि अधिक विश्लेषक-उन्मुख हुन्छन्, अरू पोष्टिंग र समय तालिकाका सुविधाहरूसँग निगरानीको संयोजन गर्दछन्, केहि विशेष प्लेटफर्ममा फोकस गर्दछ। यस सूचीमा, मैले कुनै पनि लक्ष्यहरू र बजेटको लागि उपकरणहरूको अधिकता भेला गर्‍यो। मलाई आशा छ कि तपाईले एक मिल्दो फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यस सूचिमा सबै ब्राण्ड निगरानी उपकरणहरू या त नि: शुल्क छन् वा नि: शुल्क परीक्षण प्रस्ताव गर्दछ।
अवारियो एक सामाजिक सुन्ने उपकरण हो जुन तपाईंको कुञ्जीशब्दहरू (तपाईंको ब्रान्ड नाम सहित) वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सक्दछ। Awario साना र मध्यम कम्पनीहरु र मार्केटिंग एजेन्सीहरु को लागी एक उत्तम विकल्प हो: यो एक धेरै सस्तो मूल्य ट्याग मा शक्तिशाली विश्लेषण प्रदान गर्दछ।
यसले तपाईंको ब्रान्डको सबै उल्लेखहरू सोशल मिडियामा, मिडिया आउटलेटहरू, ब्लगहरू, फोरमहरू, र वेबमा फेला पार्दछ। त्यहाँ फिल्टरहरूको विस्तृत सेट छ जुन तपाईंलाई तपाईंको अनुगमन अधिक सटीक बनाउन अनुमति दिन्छ रaबूलियन खोज मोड तपाइँ धेरै विशिष्ट प्रश्नहरु सिर्जना गर्न मद्दत गर्न। यो मद्दत गर्न सक्छ यदि तपाइँको ब्रान्ड नाम पनि एक सामान्य संज्ञा हो (एप्पल सोच्नुहोस्)।
Awario संग तपाइँ व्यक्तिगत अनलाइन उल्लेख र यी उल्लेख को एनालिटिक्स को लागी पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्। उपकरणले तपाइँलाई तपाइँको ब्रान्ड को बारेमा चर्चा गर्ने मानिसहरु मा जनसांख्यिकीय र व्यवहार डेटा दिन्छ, तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु संग तपाइँको ब्रान्ड तुलना गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, र तपाइँको ब्रान्ड उल्लेख इन्फ्लुएन्सर्स मा एक अलग रिपोर्ट प्रदान गर्दछ।
तपाईं ईमेल, स्ल्याक, वा पुश सूचनाहरू द्वारा नयाँ उल्लेखको साथ तपाईंलाई सूचनाहरू पठाउन अवारियो सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्य निर्धारण: monthly २ -29 -२299; मासिक बिल हुँदा; बार्षिक योजनाहरूले तपाईंको २ महिना बचत गर्दछ।
नि: शुल्क परीक्षण: स्टार्टर योजनाको लागि days दिन।
सामाजिक खोजकर्ता जो व्यक्ति विशेष उल्लेख संग काम गर्न चासो राख्नेहरु को लागी एक उत्तम विकल्प हो। यो एक सजीलो-प्रयोग गर्न मिल्ने वेब प्लेटफर्म हो जुन तपाईंलाई तपाईंको ब्राण्डको उल्लेख फेसबुक, ट्विटर, रेडडिट, यूट्यूब र अधिक सहित धेरै स्रोतबाट प्राप्त गर्दछ।
सामाजिक खोजीको पहिलो फाइदा यसको सहज डिजाइन हो - जब तपाईं आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहुन्छ तपाईंलाई तत्काल तपाईंको कुञ्जी शब्द राख्नुहोस् र अनुगमन सुरु गर्नुहोस्। तपाईले इ-मेलको साथ साइन अप गर्न पनि आवश्यक पर्दैन। सामाजिक खोजकर्ताले उल्लेख पाउनको लागि केहि समय लिन्छ र त्यसपछि तपाईंलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट उल्लेखहरूले भरिएको फिड देखाउँदछ। तपाईं विश्लेषक ट्याबमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ स्रोतहरू द्वारा उल्लेख ब्रेकडाउन हेर्नको लागि, तिनीहरू पोस्ट गरिएको द्वारा, र भावनाबाट।
सामाजिक खोजक एक उत्तम विकल्प हो यदि तपाईं चाँडै अनलाइन कुञ्जीशब्दको उल्लेख जाँच गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं स्थापित ब्रान्ड अनुगमन प्रक्रिया चाहनुहुन्छ भने, अधिक सुविधाजनक यूआईको साथ अन्य उपकरणहरूमा ध्यान दिनुहोस्।
मूल्य निर्धारण: नि: शुल्क, तर तपाइँ ईमेल सचेतहरू र एकनिष्ठ अनुगमन सेट अप गर्न एक योजनाको लागि तिर्न सक्नुहुनेछ (€ 3., to to देखि € १) .49aमा एक महिना)।
नि: शुल्क परीक्षण: उपकरण नि: शुल्क छ।
मेन्टलिटिक्स एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धन उपकरण हो जुन प्रकाशन कार्यक्षमतासँगै ब्रान्ड अनुगमन प्रदान गर्दछ। र यसले यी दुवै चीजहरू उत्कृष्ट तरिकाले प्रबन्ध गर्दछ।
यसले वास्तविक समयमा फेला पार्ने कुराकानीहरूमा हाम फाल्ने अनुमति दिन्छ र सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ। यो तपाईंको ब्रान्ड दुबै सोशल मिडिया र वेबमा र २० भन्दा बढी भाषाहरूमा ट्र्याक गर्न सक्षम छ।
के Mentionlytics बाहिर अलग बनाउँछ सामाजिक बौद्धिक सल्लाहकार हो। यो एक एआई सेवा हो जुन सामाजिक डेटाबाट कार्ययोग्य अंतर्दृष्टि निकाल्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ तपाइँको ब्रान्डको अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले स्वचालित रूपमा तपाइँको ग्राहकहरूको मुख्य दुखी पोइन्टहरू फेला पार्न र तपाइँलाई तपाईंलाई हाइलाइट गर्न सक्षम हुन्छ।
यसका अतिरिक्त, मेन्स्टलिटिक्सले भेट्टाएको उल्लेख, प्रतिस्पर्धी अनुगमन, र बुलियन खोजी मोडको पहुँच र प्रभावमा विश्लेषणात्मक प्रस्ताव गर्दछ।
मूल्य निर्धारण: एक महिना $ 39 बाट $ 299 सम्म।
नि: शुल्क परीक्षण: उपकरण 14-दिन नि: शुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ।
Tweetdeck यो अधिक प्रभावी ढंगले प्रबन्धन गर्न मद्दतको लागि ट्विटरबाट आधिकारिक उपकरण हो। ड्यासबोर्ड स्ट्रिमहरूमा व्यवस्थित गरिएको छ ताकि तपाईं फिड, सूचनाहरू, र एकै पटकमा धेरै खाताहरूको उल्लेख अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्रान्ड निगरानीको लागि, तपाइँ एक "सिच" स्ट्रिम सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँको कुञ्जीशब्दको सबै उल्लेखहरू (ब्रान्ड नाम वा तपाइँको वेब पृष्ठ) लाई तपाइँको ड्यासबोर्डमा पुर्‍याउँछ। यो ट्विटर मा उन्नत खोज को रूप मा उस्तै तर्क प्रयोग गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो ब्रान्ड अनुगमन सेटिंग्स को लागी स्थान, लेखक, र स of्लग्नताको संख्या रोज्न सक्नुहुन्छ।
ट्विटडेकको मुख्य फाइदा यसको विश्वसनीयता हो: किनकि यो आधिकारिक ट्विटर उत्पादन हो, तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि यसले सबै उल्लेख सम्भव पाउँदछ र ट्विटरमा जडान गर्न कहिल्यै समस्या हुँदैन।
नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि यो एक प्लेटफर्ममा मात्र केन्द्रित छ। यदि तपाइँको ब्रान्डको एक स्थापित ट्विटर उपस्थिति छ र यसलाई निगरानी गर्न नि: शुल्क समाधानको आवश्यक छ भने, ट्विटडेक एक उत्तम विकल्प हो।
मूल्य निर्धारण: नि: शुल्क।
तपाईं देखेर छक्क पर्नुहोला Semrush यस सूचीमा - सबै पछि, यो मुख्य रूपमा एक SEO उपकरण को रूप मा परिचित छ। यद्यपि यससँग बलियो ब्रान्ड निगरानी क्षमताहरू छन्, पहिलो र सबैभन्दा पहिले वेबसाइटहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै।
उपकरणले उल्लेखहरूको सहज फिड प्रदान गर्दछ जहाँ तपाइँ व्यक्तिगत पोष्टहरू र पृष्ठहरूसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई ट्याग र लेबल गर्न सक्नुहुन्छ, र थप सटीक चित्रको लागि परिणामहरू फिल्टर गर्नुहोस्। वेबसाइटहरु संगै, Semrush ले ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि निगरानी गर्दछ।
Semrush धेरै वेबसाइट-उन्मुख भएकोले, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विशिष्ट डोमेनहरू निगरानी गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। यो विशेष गरी उद्योग-सम्बन्धित मिडिया वा एक विशेष समीक्षा वेबसाइट को निगरानी को लागी उपयोगी हुन सक्छ जहाँ तपाइँको ब्रान्ड को सबै भन्दा चर्चा गरिएको छ।
यसबाहेक, Semrush एक दुर्लभ उपकरण हो जसले लिङ्कहरू समावेश गर्ने अनलाइन उल्लेखहरूबाट ट्राफिक मापन गर्न सक्छ - Google Analytics सँग यसको एकीकरणले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटमा सबै क्लिकहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ।
मूल्य निर्धारण: ब्रान्ड अनुगमन गुरु योजनामा ​​समावेश छ जुन month १ $ एक महिनाको लागत आउँछ।
नि: शुल्क परीक्षण: त्यहाँ--दिन नि: शुल्क परीक्षण उपलब्ध छ।
सम्झनुहोस् एक फ्रान्सेली कम्पनी हो जुन अनलाइन वार्तालाप अनुगमन र सुन्न समर्पित छ। यो मध्यम आकारको कम्पनीहरू र इन्टर्प्राइज-स्तर ब्रान्डका लागि उत्तम छ किनकि यसले बलियो ब्रान्ड निगरानीको लागि अन्य उपकरणहरूको साथ धेरै फरक विश्लेषण र एकीकरण प्रदान गर्दछ।
यसले वास्तविक समय खोजीमा धेरै महत्त्व दिन्छ - यस सूचीका अन्य उपकरणहरू जस्तो (आवरियो, ब्रान्डवाच) यसले केवल ऐतिहासिक डाटा प्रदान गर्दछ (उदाहरणका लागि एक हप्ता भन्दा पुरानो उल्लेख) एक add-on को रूपमा। यसले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फोरमहरू, ब्लगहरू, भिडियोहरू, समाचारहरू, वेब, र रेडियो र टिभीबाट डाटा खींच्न सुनिश्चित गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो ब्रान्डमा भएका सबै कुराकानीहरूको जानकारीमा रहन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
ब्रान्ड निगरानी उपकरण लेण्डर, भावना विश्लेषण, पहुँच र मा मा सहित मीट्रिक को सबै प्रकारको एक विस्तृत विश्लेषणात्मक ड्यासबोर्ड प्रदान गर्दछ। योसँग एक एपीआई एकीकरण पनि छ जसले तपाईंलाई आफ्नो विश्लेषक तपाईंको आफ्नै उपकरण वा वेबसाइटमा निर्माण गर्न सक्षम गर्दछ।
मूल्य निर्धारण: उपकरण १.०० उल्लेख सम्म निःशुल्क छ। त्यहाँबाट, मूल्यहरू एक महिनामा $ 1,000 मा शुरू हुन्छ।
नि: शुल्क परीक्षण: उल्लेखित भुक्तान योजनाहरूको लागि १ 14-दिन नि: शुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ।
BuzzSumo सामग्री मार्केटिंग उपकरण हो त्यसैले यसको ब्रान्ड अनुगमन क्षमताहरू सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइरहेका ती ब्रान्डहरूको लागि विशेष रुचि हुन सक्छ।
उपकरणले तपाईंलाई तपाईंको ब्रान्डमा उल्लेख गरिएको सबै सामग्री ट्र्याक गर्न दिन्छ र सामग्रीको प्रत्येक टुक्राको वरिपरि स engage्लग्नताको विश्लेषण गर्दछ। यसले तपाइँलाई सामाजिक मिडियामा सेयरहरूको संख्या, मनपर्दो संख्या, दृश्य र क्लिकहरूको संख्या दिन्छ। यसले तपाईंको खोजको लागि समग्र तथ्या .्क पनि देखाउँदछ।
सतर्कताहरू सेट अप गरेर तपाईं प्रत्येक नयाँ लेख र तपाईंको ब्रान्ड उल्लेख ब्लग पोष्टको साथ अप-टु-डेट रहन सक्नुहुनेछ। तपाईं ब्रान्ड उल्लेख, प्रतिस्पर्धी उल्लेख, वेबसाइटबाट सामग्री, खोजशब्द उल्लेख, ब्याकलिks्क, वा लेखक ट्र्याक गर्न सचेतहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
मूल्य निर्धारण: मूल्यहरू $ 99 बाट सुरू हुन्छ।
नि: शुल्क परीक्षण: नि: शुल्क -०-दिनको परीक्षण छ।
टॉक वाकर सामाजिक मिडिया एनालिटिक्स समुदायमा यसको नाम छ - यो मुख्य सामाजिक सुन्ने र अनुगमन उपकरणहरूको एक मानिन्छ। र यथार्थ कुरा त!
यो धेरै एनालिटिक्स ड्यासबोर्डहरू र एआई-आधारित अंतर्दृष्टिका साथ ठूला मार्केटि teams टोलीहरूको लागि उद्यम-स्तर उपकरण हो। टकवाकरले वास्तविक समयमा डेटा डेलिभर गर्दछ तर यसले दुई वर्ष सम्म फिर्ता हुने ब्रान्ड उल्लेखलाई पनि संकलन र विश्लेषण गर्दछ। कुराकानीलाई यसको प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा फरक पार्ने एक चीज भनेको दृश्य मान्यता हो: उपकरणले छवि लोगो र इन्टरनेटमा भिडियोमा तपाईंको लोगो पत्ता लगाउन सक्षम छ।
टकवाकरले १० सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरूबाट डेटा अस्पष्ट गर्दछ जस्तै अधिक अस्पष्ट व्यक्तिहरू जसमा वेबो र टिभी र रेडियो समाचारहरू।
मूल्य निर्धारण: $ 9,600 + / वर्ष।
नि: शुल्क परीक्षण: नि: शुल्क परीक्षण छैन, तर नि: शुल्क डेमो छ।
अर्को इन्टरप्राइज-स्तर ब्रान्ड निगरानी समाधान हो मेल्टवटर। यो एक सामाजिक मिडिया र मार्केटिंग एनालिटिक्स प्लेटफर्म हो जुन एआईमा भर पर्दछ कार्यक्षम अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न।
यो सामाजिक मिडियामा मात्र देखिन्छ, सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू, ब्लगहरू, र समाचार साइटहरूबाट प्रत्येक दिन लाखौं पोष्टहरू जाँच्दै। यसले अप्रासंगिक उल्लेखहरूलाई फिल्टर गर्दछ र भावनाहरू निर्दिष्ट गर्दछ तपाइँलाई इच्छा छ कि उल्लेख गर्नुहोस्
मेल्टवटरमा बहु ड्यासबोर्डहरू समावेश छन् जुन तपाईंको अनलाइन गतिविधि निगरानी, ​​बेन्चमार्क, र विश्लेषण गर्दछ। तपाइँ अनुकूलन ड्यासबोर्ड पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको आवश्यकताहरू अझ राम्ररी पूरा गर्न।
मूल्य निर्धारण: $ 4,000 + / वर्ष।
नि: शुल्क परीक्षण: नि: शुल्क परीक्षण छैन, तर तपाईं नि: शुल्क डेमो अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ।
नेटबेस समाधान एक विशाल मार्केटिंग खुफिया प्लेटफर्म हो जसले प्रतिस्पर्धी बुद्धिमत्ता, संकट व्यवस्थापन, टेक्नोलोजी स्काउटिंग र अन्य समाधानहरू समावेश गर्दछ।
यो ब्रान्ड निगरानी उपकरण धेरै उन्नत छ - यसले तपाइँलाई सामाजिक मिडिया, वेबसाइटहरू, र पारम्परिक मिडिया च्यानलहरू मार्फत तपाइँको ब्रान्ड ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ; मुख्य कारकहरू पहिचान गर्नुहोस् जसले भावना विश्लेषण मार्फत ब्रान्डको जोसलाई प्रभाव पार्दछ र तपाईको व्यवसाय केपीआईमा यो सबै डाटा टाई दिन्छ।
सोशल मिडियाबाट प्राप्त गरिएको डाटाको साथसाथै यसले तपाईंको ब्रान्डको बारेमा सकेसम्म पत्ता लगाउन सर्वेक्षणहरू, फोकस समूहहरू, रेटिंग्स र समीक्षा जस्ता अन्य स्रोतहरू प्रयोग गर्दछ।
मूल्य निर्धारण: नेटबेसले सार्वजनिक रूपमा यसको मूल्य निर्धारणमा जानकारी प्रदान गर्दैन, जुन उद्यम-स्तर उपकरणहरूको लागि सामान्य हो। तपाईं बिक्री टोलीलाई सम्पर्क गरेर कस्टम मूल्य निर्धारण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क परीक्षण: तपाईं नि: शुल्क डेमो अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको लक्ष्य के हो?
कुनै पनि कम्पनीको लागि ब्रान्ड अनुगमन अनिवार्य छ, तर कुन उपकरणहरू तपाईंले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ तपाईंमा निर्भर गर्दछ। तपाईंको बजेट, तपाईंले कभर गर्न चाहानु भएको प्लेटफर्म र तपाईंको लक्ष्यहरू हेर्नुहोस्।
के तपाईं ग्राहक अनुरोधहरूको ख्याल राख्न र स increase्लग्नता बढाउन व्यक्तिगत उल्लेखमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहानुहुन्छ? वा हुनसक्छ तपाइँ तपाइँको मार्केटिंग रणनीति सुधार गर्न तपाइँ लक्षित श्रोताको विश्लेषण गर्न चाहानुहुन्छ? वा के तपाईं विशिष्ट वेबसाइट वा समीक्षा एग्रीग्रेटरहरूको प्रतिक्रियामा रूचि राख्नुहुन्छ?
त्यहाँ कुनै पनि आवश्यकता र बजेट को लागी एक उपकरण छ, र ती मध्ये धेरैले नि: शुल्क संस्करणहरू वा नि: शुल्क परीक्षण प्रस्ताव गर्दछन् ताकि म तपाईंलाई एक कुराको लागि प्रोत्साहित गर्दछ जुन तपाईंको आवश्यकताहरू मिल्दछ र यसलाई प्रयास गर्नुहोस्!
त्याग: Martech Zone को लागी उनीहरुको सम्बद्ध लिंक को उपयोग गरीरहेको छ अवारियो र Semrush.
टैग: awarioब्रान्ड अनुगमनब्रान्ड प्रतिष्ठा उपकरणbuzzsumoपग्लिनुउल्लेखउल्लेखात्मकअनुगमन उपकरणहरूनेटबेसsemrushसामाजिक श्रवणसामाजिक खोजीकुराकानीTweetdeck
Anna Bredava Monday, April 5, 2021 Monday, October 18, 2021
अन्ना ब्रेडावा एक सामाजिक मिडिया मार्केटिंग विशेषज्ञ हुन् अवारियो। उनी डिजिटल मार्केटिंग, सामाजिक मिडिया प्रवृत्ति, सानो व्यवसाय मार्केटि and र उपकरणहरू को बारे लेख्दछन् जसले मार्केटिंगमा रुचि सबैलाई सहयोग गर्दछ।
शीर्ष १० अनुप्रयोग स्टोर अप्टिमाइजेसन उपकरणहरू लोकप्रिय अनुप्रयोग प्लेटफर्महरूमा तपाईंको अनुप्रयोगको श्रेणी निर्धारण सुधार गर्न
Smarcking: तपाईंको B2B बिक्री र मार्केटिंग टोली प Al्क्तिबद्ध गर्दै